AudioNotes chishandiso chitsva chekunyora zvinyorwa zveodhiyo paMac | Ndinobva mac
Kutora manotsi paMac kunogona kuve nyore kwazvo kana tikashandisa izvo chaizvo zvikumbiro uye kana kwatiri isu tisingade kunyora kana kusakwanisa kuzviita pane imwe nguva, tine zvikumbiro zvinoverengeka zvinotibvumidza kutora manotsi ekuteerera. Mune ino kesi isu mune Mac App Store chishandiso chitsva chinotibvumidza isu vashandisi veMac tora memos ezwi nenzira yakapusa uye inokurumidza, apo uchibvumira mushandisi kuve neicho chakawedzera chigadzirwa kuti aite basa.
Zvikumbiro zvekunyora manotsi ezwi isu tine akati wandei sekutaura kwatamboita pakutanga kwechinyorwa chino, asi zvinogara zvakanaka kuyedza nekutambira mafomu matsva ayo anofambisa basa uye anobudirira. Mune ino kesi isu tine iyo nyowani AudioNotes application iyo inotibvumidza isu kunyorera manotsi ezwi nekamwe chete kudzvanya.
Iwo mashandiro akakosha kwazvo uye isu tinofanirwa kuve takajeka nezve mamwe mapoinzi eichi chishandiso. Iyo yekurekodha nguva yemanotsi haipfuure mineti imwe mukushandisa, saka hatigone kushandisa yakawandisa nguva kurekodha asi kune mazhinji ezvinyorwa zvinokurumidza zvinofanirwa kutishandira. Uye zvakare, iwo manotsi atinonyoresa mukushandisa inozobviswa otomatiki muvhiki, saka tinofanirwa kujekesa kuti hachisi chikumbiro chekuchengetedza manotsi kwenguva refu.
AudioNotes yakaiswa mubhari yekushandisa uye zviri nyore kwazvo kumisikidza kana uchizvida. Iko kushanda kwemahara uye sezvinodiwa kuti ishande paMac yedu ivo vanongotibvunza isu kuti isu tinofanirwa kunge takaisa OS X 10.11 kana kupfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » AudioNotes chishandiso chitsva chekuteedzera odhiyo manotsi paMac